Wasiir Nuux oo maanta markale dib loogu doortay kursigii xildhibaanimo oo hore looga diiday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Nuux oo maanta markale dib loogu doortay kursigii xildhibaanimo oo hore looga diiday
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gaba-gabeeyay doorashada mid ka mid ah 5-tii kursi uu guddiga xallinta khilaafaadka doorashada hore u laalay, kadib markii uu sheegay in hab aan sharciga waafaqsaneyn oo musuq-maasuq ah lagu soo doortay.
Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Xasan Nuux oo hore loogu doortay kursiga beesha Gugundhabe/Jiidle, balse uu guddiga diiday sharci ahaantiisa ayaa maanta markale dib loogu doortay kursigaas.
Wasiir Nuux ayaa helay codad gaaraya illaa 43 cod, halka musharixii kale ee isaga la tartaamayay oo lagu magacaabo Hinda Maxamed Cumar ay iyadana heshay 1 cod oo kaliya.
Kursigaan ayaa la sheegayaa inuu qorshihiisu ahaa inay ku tartamaan musharixiin gaaraya illaa 6 musharax, balse ay ku tartameen oo kaliya labo musharax.
Musharixiinta kale ayaa ku andacoonaya inaan doorashada lasoo ogeysiin islamarkaana doorashada kursigaasi ay tahay mid aan sax ahayd oo si musuq maasuq ah lagu soo doortay.
Kursiga maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa noqonaya midkii 4-aad ee dib loo soo doorto 5-tii kuraas ay guddiga xallinta khilaafaadka doorashada hore u laaleen, waxaana weli dhiman 1 kursi oo kaliya, kaas oo isna dhawaan lasoo dooran doonno.